IBM ine itsva yemahara yekudzidzisa chikuva muSpanish | Linux Vakapindwa muropa
IBM yanga iri imwe yemakambani anga akabatana zvakanyanya nekuvandudzwa kweLinux kernel, pamwe nemamwe mapurojekiti. Uye zvakare, iye zvino ava neRed Hat yekuvandudza kukwikwidza kwayo mumasevhisi emakore. Uye, hongu, zviri pachena kuti yakazvipira kune yakawanda yakavhurwa sosi mapurojekiti. Zvino, iye anodawo kupa chimwe chinhu kuvadzidzi nevadzidzisi, uye zvinoita saizvozvo kuburikidza neinonakidza online chikuva chedzidzo. Iyi chikuva inowanikwa mahara uye muchiSpanish.
Iyo yakasarudzika yebhuruu tech hofori nguva pfupi yadarika yakatanga chirongwa ichi chekudzidza nechishandiso chayo Vhura P-TECH. Nenzira iyi, vadzidzi nevadzidzisi vachakwanisa kudzidza nezve cybersecurity, huchenjeri hwekunyepedzera uye gore komputa yemahara uye mumutauro wavo wechiSpanish. Uye vese vane ruzivo rwakakura rweIBM mune ino chikamu uye maindasitiri-anokoshesa zvitupa zvaunogona kuwedzera kuCV yako kana mbiri yeLinkedIn.
Nayo, unogona kukudziridza hunyanzvi hwakanaka uye kugona mundima dzataurwa mundima yapfuura. Nemakirasi anokosheswa-musika pamusika wepasirese uye nemisoro inodiwa zvakanyanya munzvimbo yanhasi yebasa Iri richava dombo rekutanga kuvaka rakakura reSpanish redzidzo nzanga kugadzirira nyanzvi mune ramangwana nenzira iri nani.
Iyi chikuva ine kuwanda kwezvinhu zvekufunda, uye zvakare inobvumidza kuwana zvitupa zvinotenderwa neindasitiri uye nekupa yakasarudzika nzira yekufambira mberi yemudzidzi wega wega. Zvemukati zvakapihwa zvinozovakirwa pane zvakawanikwa uye kufambira mberi mukati mega yega yezvirongwa zvedzidzo zviripo.
Kana iwe uchida tanga kuyedza iyi chikuva nyowani IBM Vhura P-TECH, unogona kuzviita izvozvi kuti uvandudze chinzvimbo chako chazvino chebasa kana kuwana mitsva mitsva mune ramangwana. Unofanira chete pinda papuratifomu yepamhepo, kunyoresa, uye kutanga kunakidzwa nezvakanaka zvacho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » IBM ine itsva yemahara yekudzidzisa chikuva muSpanish
Ndiri kufarira! Ndeapi makosi ndapota? Ndatenda!
MuWindows 10 20H1, WSL 2 inoti inokurumidza kagumi nekukurumidza